Iimpawu zeNdalo zeMpilo zezeMpilo
Wonke umntu uyazi ukuba kutheni iindlela zokuzicoca umzimba zongeza ikhofi: itshisa amanqatha. Ikhukhamba, nayo, yonke into icacile malunga neendawo zayo zokuqhaqhafaza ezaziwa ixesha elide. Makhe sibone isizathu sokuba yonke imifuno nezityalo zisetyenziswe kwi-cosmetology.
Imifuno neziqhamo ziyisipho esimangalisayo semvelo. Ziyancipha kalula ngomzimba wethu zivela ngaphakathi nangaphandle. Zonke iintlobo zeemaski ezivela kwizipho ezahlukileyo zegadi ziqinisekisile ngoku. Ngokomzekelo, ukuxinwa kwezambane akuyiyo inkulungwane yokuqala inceda wonke umntu ofuna ukulahla iikhwama phantsi kwamehlo. Ngako oko, akukho nto imangalisayo kukuba kwi-cosmetology iicutshu kunye nezicatshulwa ezivela kwiintlobo ezahlukahlukeneyo zisetyenziswa rhoqo. Ngezantsi siza kuqwalasela izinto ezithandwa kakhulu kubo. Iimpawu zendalo zempilo yentsapho ngummangaliso kakhulu kuwe.
Ukukhutshwa kwi-berry emigqabini ixutywa rhoqo kwizonyiso zesikhumba esibucayi nesomileyo. Ijusi le-Watermelon liyancipha, londla kwaye lincinci. Ngexesha elifanayo, ityhila isikhumba esikhulayo, iguqa umbala, kwaye iyayilula kwaye yenze ibe lula. Ekhaya, i-watermelon ijusi ingasetyenziswa njenge-compress: i-moisten i-napkin ngokuqhelekileyo kwaye ibeke ubuso ngobunemizuzu engama-20 - olu khetho luyanciphisa ngokupheleleyo i-epidermis emva kokuvezwa kwelanga (ukukhanya, njengombandela, kuthatha ubuninzi bomswakama). Umntwana womdiliya usetyenziswa ngokunyanisekileyo kwizonyiso kuzo zonke iintlobo zesikhumba. Sekude kubekho iivini ezithe zaziwa ngokuba zizifo ezinomsoco kunye nezindlovu. Isicatshulwa samagilebhisi sinceda ukugqithisa isikhumba, senze sibe lula kwaye sithandeke, sinceda ukujamelana nokugqwesa nokugqwesa. Ukongezelela, izinto ezenza iqoqo lilawula ukuveliswa kwe-melanin, oko kukuthi, kwindawo yokukhusela ekubonakala kwimibala enemibala. Yongeza kwizonyango kungekhona nje inyama yerokriji, kodwa namathambo, namasebe - umdiliya ngokwawo. Le ndlela yokugqibela isetyenziselwa ukudala ama-cream anti-aging ukuphucula amandla esikhumba ukujamelana nemiphumo emibi yendalo. Ukususela kwioli ye-imbewu iyalungiswa - iyasetyenziswa ngokubanzi kumalungiselelo ekhumba elinamafutha, kuba ivumela ukulawula umsebenzi weengqungquthela ezihlambulukileyo. Le ngcambu ithathwa njengabantu baseRashiya, nangona kunjalo ukuba ngumfuduki: ii-beet zaziswa eRashiya ngamaGrike ekhulwini le-9 le-10. Izicatshulwa zeBeet zihlala zikhona kwizonyiso zesikhumba seoli. Ukubunjwa kwevithamini ecebileyo ingcambu ivumela ukuba kulungelelaniso imveliso ye-sebum, eyanceda ukulwa namaqabunga kunye nokuvuvukala, amaqabane angunaphakade wekhumba elinamafutha. Iibhontshi zingasetyenziselwa ekhaya. Ubilise isithelo esingaqhatyisiweyo, siqhekeze uze usixolele. I-gruel eyiphumela isetyenziswe ebusweni kwaye ibambe isigxina seyure. Emva koko uhlambe ngamanzi apholileyo.
Isiqhamo esineziqhamo esingaqhelekanga siphelela ixesha lokufika kobudala. Izicatshulwa zalo zisetyenziselwa izimonyo zokulwa nemibimbi yokuqala. I-Kiwi ivuselela i-epidermis, ivuselele ukuhamba kwegazi, ixhasa iinkqubo zokuvuselelwa kweeseli. Yenza i-cosmetologists ingabongozisi ama-masks avela kwi-kiwi yesikhumba esibucayi: ingozi yokuphendulwa kwemizwa ehle kakhulu. Kodwa ukususela kwisiqhamo, unokukwazi ukukulungisa ngokukhawuleza isidumbu somzimba: ngenxa yale nto kufuneka uhluthe i-kiwis ezintathu, welula u-pulp kwi-puree state kwaye wongeze i-tbsp. l. iitroti zokuhlamba okanye iisalati zasolwandle. Ukubunjwa kunye nokunyuka kweetyhula kuluhlu kumzimba, kodwa kungekho ngaphezu kwemizuzu engama-10, uze uhlanza ngamanzi afudumele.
Iingcambu ze-Orange zicebile kakhulu kwiivithamini (C, D, E, iqela B) kunye nezinto ezilandelelanayo (i-potassium, i-calcium, insimbi, i-phosphorus, njl.), Ngoko isetyenziselwa ngokusetyenziswa kuphela kwiimveliso zesikhumba, kodwa nakwimveliso yeenwele . Kwiidroti, ezininzi ze-carotene, apho umzimba wethu uphendukela kwi-vitamin A, ebizwa ngokuba yi-vitamin yobuhle. Nangona kunjalo, i-beauticians ayiluleki ukuba enze i-masks ephuma ekhaya: imifuno ifuthe kwi-pigmentation yesikhumba, kwaye ukugqithisa kwiinqatyi ezinokutsala kungakhokelela kumathambo.
Iingcaphephe zithi amajikijolo amnyama anomtsholongwane anokuqulethe i-antioxidants - izinto ezinceda ulusu lwethu ukulwa nemiphumo ebuhlungu yendalo. Iiblueberries zongezwa kwiikhilimu zokukhathala, ukuphosa, isikhumba esikhathekayo, apho kubonakala khona imibimbi phambi kwexesha, kuba zonke ezi zibonakalisa ukuba i-epidermis ayikwazi ukuhlangabezana nabangqingili bangaphandle (i-ultraviolet, i-toxic from smog, njl. Nangona kunjalo, i-blueberries ayikwazi ukuyeka kuphela inkqubo yokuguga kwangaphambili, kodwa iphinde ikhawuleze inkqubo yokuphilisa yokutshisa. Thela 2 tbsp. l. amajikijolo eneglasi yamanzi, ubilise kwaye upholile. Yenza i-compress out of it kwaye uyisebenzise kwilonda rhoqo imihla ngemizuzu engama-30-40.
Ngokuqhelekileyo, i-cosmetology isebenzisa ijusi yemifuno ebomvu. Phakathi kwezinye izityalo, iitamatisi ziphezulu kwiivithamini E (iyancipha ukuguga kweeseli) kunye nePP (isantya kwiinkqubo zesisombululo, ithathwa njengeyeza). Yandisa iipropati zokukhusela zomzimba - ize iyenze ikwazi ukuxhathisa imisebe, inefuthe elichasayo, ikhupha ikhumba, iguqula umbala wayo kwaye iyancipha imibala. Iitamatato eziqhelekileyo zongezwa kwii-lotions kunye neekremu zesikhumba esineziqhwaba. I-mask evela kwitamatato inokulungiswa ekhaya: hlabanisa utamatato ococekileyo, 1 tbsp. l. ubisi, 1 tsp. ioli kunye ne-2 tbsp. l. i-curd curd, sebenzisa ubunzima obunobangela ebusweni (ukuphepha indawo ejikeleze amehlo) imizuzu engama-20, uze uhlambe ngamanzi afudumeleyo.
Iimfuno ezikhethekileyo kwi-cosmetology ziyakuthandwa ngamafutha alezi ziqhamo eziluhlaza. Ngokuqhelekileyo zisetyenziselwa iziqholo zokulwa nokuguga kunye neendlela zesikhumba esilumkileyo. Ngakolunye uhlangothi, ioli yomnquma iyanciphisa i-epidermis, inqanda ukulahlekelwa ngumswakama, ayigcini i-pores kwaye iqinisa amandla omzimba wendawo. Ngakolunye uhlangothi lunefuthe lokuvuselela. Ngokusetyenziswa rhoqo, iziqhumiso ngeoli yeoli ekhusela ukubonakala kwemibimbi, amanqaku atyulweyo, okwenza ulusu lukhuphe kwaye luphephe. Ukuqinisekiswa okucacileyo kwezi mpropati yiNtaliyane enguSophia Loren ongapheliyo, umtshizi owaziwa kakhulu wezilumbiso kwioli yeoli. Ngo-76, ibonakala ibukhali njengoko yayineminyaka engama-20 edlulileyo.
Indlela yo bugcisa
Mask Vegetable for the body, esetyenziswe kwiironons ezihle. Imifuno kunye neziqhamo zisetyenziselwa iinkqubo ze-salon, ngokuqhelekileyo zifakwe ngendlela yemaski, esetyenziswe emzimbeni imizuzu eyi-15-20. Isiqwenga sesityalo sondla isikhumba, sinciphisa inkqubo yokuguga ngokwemvelo. Kukulungele zonke iintlobo zesikhumba, kodwa kunconywa ngokukhethekileyo kwesikhumba esomileyo. Ukulungiselela i-mask ye-salon yemifuno yemifuno ukuze umzimba usebenzise umxube weoli yevini, i-jojoba ioli, ioli ye-almond, i-coconut, ioli, i-celery, ikhukhamba, i-pumpkin kunye needrots, i-juicy tomato kunye neoli efunekayo ye-basil.
Ukulungiswa kwamehlo: iingcebiso ezine ezivela kubungcali bezenziwe
Unokukhawuleza ukuba ususe isini sesibini?
I-pankwake yamackwheat (kunye nomgubo wengqolowa)
Ungaziqonda njani ukuba indoda ifanelekile kumfazi
Ilayisi ngeengulube, ebhakakwe emathangeni
Iindlela ezili-10 zokufumana indoda ukuba ihambe
Ukuqulunqwa koxinzelelo: ukuphelisa njani imiqondiso yokukhathala ngemizuzu elishumi